किन ,के कारण फर्फराउँछ आँखा ? – News Nepali Dainik
किन ,के कारण फर्फराउँछ आँखा ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र ०७, २०७७ समय: ८:३२:५२
आँखा शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो, जुन दृष्टिको काममा आँउछ । मानव शरीरमा दुई आँखा हुन्छन् । यो दुईटै आँखा खोपडीको अर्बिटमा अवस्थित हुन्छन्। आँखाको फोटोरिसेप्टर प्रकाशलाई विद्युतीय सिग्नलमा परिवर्तन गर्दछ। यो सिग्नललाई अप्टिक स्नायु मस्तिष्कमा पुर्याउँछ र व्यक्तिलाई दृष्टिको अनुभुति हुन्छ। तर, कहिलेकाहिँ आँखाले आश्चर्यरुपमा काम गर्ने गर्छ। जसलाई सामान्य भाषामा आँखा फर्फराउने भन्ने गरिन्छ। जुन एक साधारण प्रक्रिया हो। यसमा, आँखा वरपरका मांसपेशीहरू स्वचालित रूपमा संकुचित हुन्छन्, जसले यो समस्यालाई निम्त्याउँछ। यद्यपि, आँखा फर्फराउनुले कुनै किसिमको हानी गर्दैन।
आँखा फर्फराउने समस्या केहि घण्टा वा केहि समयको लागि हुन्छ। तर, कोहि कोहि व्यक्तिमा यो समस्या केहि दिन वा महिनौँसम्म पनि हुन सक्छ। जसलाई वेवास्ता गर्नु ठिक हँुन्दैन। सामान्यतया यो आँखाको तल्लो परेलामा हुने गर्दछ। तर, कहिलेकाहिँ माथिल्लो परेलामा पनि हुन सक्छ।
जानिराखौँ के कारण फर्फराउँछ आँखा ?
तनाव : जब कोहि व्यक्ति तनावमा हुन्छ, यस्तो बेला उसको शरीरले पनि फरक तरिकाले प्रतिक्रिया दिने गर्दछ। आँखा फर्फराउनुको एक मुख्य कारण तनाव पनि हुन सक्छ। त्यसैगरी, जब आँखामा दवाव , प्रेसर वा दृष्टि सम्बन्धी समस्या हुन्छ, तब पनि आँखा फर्फराउने गर्दछ।
एलर्जी : आँखाको एलर्जी भएका व्यक्तिहरूमा चिलाउने, आँशु आउने र आँखा फर्फराउने समस्या हुन सक्छ। यस्तो समस्यालाई समाधान गर्न चिकित्सकले विशेष किसिमको आइ ड्रप वा औषधि दिन सक्छन्।
आँखामा तनाव : दृष्टि सम्बन्धी केहि समस्या भएको बेला चस्मा वा चस्मा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। जसकारण, आँखामा दवाब वा तनाव सिर्जना हुन सक्छ। यद्यपि, आँखाका सामान्य समस्याले पनि आँखा फरफराउने समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा कम्प्युटरको अत्यधिक प्रयोगबाट बच्ने, एन्टिडिप्रेसेण्ट औषधिलाई कम गर्ने, कन्ट्याक्ट लेन्स लगाउँदा पनि आँखा सुख्खा हुने जोखिम बढेर जान्छ। जसकारण, आँखा फरफराउने समस्या उत्पन्न हुन सक्छ।
पौष्टिक आहारको कमि : पौष्टिक आहारको कमिले पनि आँखा फर्पmराउने समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो आहारमा म्याग्नेसियम जस्तो पोषक तत्त्वहरू समावेश गर्न सकिन्छ।
क्याफिन तत्व : धेरै मात्रामा क्याफिनको सेवन गर्दा पनि आँखा फरफराउने समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसकारण, कफी, चिया र चकलेट लगायतका खानेकुराको कम भन्दा कम सेवन गर्नुहोस्।
थकान : जब निन्द्रा तनाव वा कुनै अन्य कारणले पूर्ण हुँदैन, तब पनि आँखा फर्पmराउने समस्या उत्पन्न हुन्छ। राम्रो र तनाव मुक्त निन्द्राले यस्तो समस्यालाई केहि हदसम्म निर्मुल गर्न सक्छ।
Last Updated on: March 20th, 2021 at 8:32 am